Nvidia Titan X, nke dị ugbu a na Spain maka euro 1.310 | Akụkọ akụrụngwa
Izu ole na ole gara aga Nvidia gosiputara ndi mmadu ihe di egwu Titan X, a eserese nke dị ka katalọgụ dị ka nke kachasị ike nke ụdị ya, dabere na Pascal. Mgbe ogologo echere, ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtaala n'izu a na ọ ga-amalite ịre ahịa na Spain na ọnụahịa nke 1.310 euro, ọnụahịa dị oke ọnụ ahịa mana nke ahụ na-akwụ ụgwọ site na nkọwa nkọwa dị egwu nke eserese a.
Agbanyeghị… uru? Eziokwu bụ na ihe niile dabere na ojiji ị ga-enye ya, ya bụ, n'onwe m agaghị m etinye ego a maka Nvidia Titan X, ma agaghị m enweta arụmọrụ ya niile. N'aka nke ọzọ, ọ bụ eziokwu na enwere ndị ọkachamara maka ọrụ ha ga-eji ụdị eserese a na ọkachasị ndị na-akwụ ụgwọ iji nọrọ n'ọkwa kacha mma.
A na-ere Nvidia Titan X na Spain na ọnụahịa nke euro 1.310
Banyere nkọwa ya, ọ bụrụ na ịchetaghị ha, gwa gị na anyị na-ekwu maka eserese ejiri ihe nhazi 102 nm GP16, 3.584 CUDA isi na 12 GB nke GDDR5X RAM, ngwa agha zuru ezu iji nweta ike na nso 11 TFLOP / s na TDP nke 250 W. Otutu nke ike a nwere njikọ chiri anya na teknụzụ nrụpụta eji kemgbe, dịka ị pụrụ ịhụ, na ndị injinia Titan X Nvidia esila na 28 nm gaa 16 nm.
Ozi ndi ozo: Nvidia
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » Nvidia Titan X, dị ugbu a na Spain maka euro 1.310